Ndezvipi zvishandiso zvingaita kuti iwe upe mazano ekutevera Amazon yekutsvaga kwandinokwikwidza?
Kuongorora kukwikwidzana chikamu chinokosha chekutsvakurudza kunoitwa nevose vanobudirira mutengesi kuAmazon. Kana iwewo unoda kutarisa Amazon yekutsvaga kwemakwikwi ako, heino pepa pepa tsambani rekubatsira iwe nezvo. Iko kukwikwidza kwako chaizvoizvo kunotyisa here? Chii chingaitwa zviri nani? Iko chigadzirwa chako chakanaka sekunyoresa kwako kunotaura here? Hezvino zvinhu zvakakosha zvekuti iwe uchengetedze zvakanyatsocherechedza - kuongororwa, kukurudzirwa, nekunyora maitiro - nattokinase life extension. Ngationei imwe neimwe iri pasi apa.
Haisi-brainer, asi kuongororwa kunonyatsobatsira kubva pakutsvakurudza kokutanga. Hapana chikonzero chokutaura kuti kugadziriswa kwevatengi pane chimwe chigadzirwa kunogona kukupa chikamu chepfungwa pamusoro pei nezvayo inogona kugadziridzwa, kana kuti zvinyorwa zvinodziviswa. Uye mutemo wegunwe ndeyekuti vatengesi vatanhatu vanopa mutengo mumwe chete vane chimwe chinhu chavanenge vachitarisa mazana matatu vanoongorora. Asi chikamu cheshumba kunyange nevatengi vakagadzikana zvachose vanouya pamwe vasina kusiya mhinduro. Saka, chii chingaitwa nezvo? Ndinokurudzira kushandisa Feedback Genius pasina mhando yekushandisa. Izvo hazvingokutumii chete chiziviso pamashoko ose asina kunaka kana kuongororwa kwevanhu kuti iwe uite nokukurumidza-kugadzirisa kwechinyorwa chiduku asi unoita kuti zvive nyore kuti utumire email zvakangoshandiswa, iyo inoshanda sechiyeuchidzo chokuremekedza ichiratidza kuti mutengi achangobva kudonhedzera kana uchapupu.
Dzimwe nguva vanokukwikwidzana vako vari pedyo vanogona kukurumidza kubuda nekutengesa kukuru, uye chikamu chakawanda chekuenderera mberi kunoendeswa nekusimudzirwa kwakabata nzira yakarurama. Uye kana iwe ukaona kuti muchero unokosha wekwikwidzi kana kungove wakangwara kakanyatsoshanda-unoregerei kutarisa Amazon kutengesa uye kukurudzira kushanda kwemuvengi wako kushandisa masimba akasimba ezvako iwe pachako? Heano apo Big Tracker online tool inotanga. Nekushandisa iyi inobatsira, haugoni kungoona Amazon sales promotions, kutengesa pricing yemakwikwi emakero ako asi ramba uchitanga zvose zvese zvekutsvaga pane zvakanyorwa. Rongedza kufamba kwako kwakatevera uchitoziva izvo vadziviriri vako vari kuita zvakanakisisa nenzira yakakwanikana iwe kuti uite zvinotevera.
Iyi ndiyo nzvimbo yekupedzisira yekutarisa kwako kuti usapinda mumakwikwi. Uye kuvandudza chigadzirwa chemhando yakagadzirwa nehuwandu hwekugadzirisa maitiro ndiyo chaiyo inowanzoendesa kune zvakanakisisa kutsvaga muIndaneti kutsva uko. Heuno maitiro aunogona kutora mutungamiri - kungofanana neAmerica sales keywords inoshandiswa nevatengesi vepamusoro kuti vauye ivo vanotsvaga vari muzvidzidzo zvenyu, zvinyorwa, mabhoti, nezvimwewo. Uye ndinokurudzira chiedza cheJungle Scout chichakuchengetedza maawa tsvina-yakasimba uye tsvakurudzo yakaoma. Tsvakai makwikwi enyu makuru metrics uye kuwana kodzero yakakosha mazano uye nzwisiso inokosha pakushandiswa kwemashoko ekutsvaga kwenguva yakareba nzira yakanakisisa inogoneka. Iwe unogonawo kutarisa Merchant Words tool, iyo inotarirwa zvakananga ku Amazon kutsvaga maitiro, neyo yakanyanya kutsvakurudza mavhesi uye mazwi ezvakarurama anoshandiswa nevararama vanogara ikoko.